Iindaba -Ingxoxo ngeteknoloji yokutshatyalaliswa kobushushu kwiziko ledatha
Ukukhula ngokukhawuleza kolwakhiwo lweziko ledatha kukhokelela kwizixhobo ezininzi ngakumbi kwigumbi lekhompyuter, elibonelela ngobushushu obungaguqukiyo kunye nobushushu bendawo yefriji kwiziko ledatha. Ukusetyenziswa kwamandla kwiziko ledatha kuya kwanda kakhulu, kulandelwa ukunyuka okulinganayo kwenkqubo yokupholisa, inkqubo yokusabalalisa amandla, i-ups kunye nejenereyitha, eya kuzisa imingeni enkulu ekusebenziseni amandla kwiziko ledatha. Ngexesha apho ilizwe lonke likhuthaza ukugcinwa kwamandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa, ukuba iziko ledatha lidla ngokufafaza amandla oluntu, ngokuqinisekileyo liya kutsala ingqalelo kurhulumente kunye nabantu. Ayipheleli nje ekuncediseni uphuhliso lwexesha elizayo lweziko ledatha, kodwa iphinda ihambelane nokuziphatha okuhle kwentlalo. Ngoko ke, ukusetyenziswa kwamandla kuye kwaba ngumxholo ochaphazelekayo ekwakhiweni kweziko ledatha. Ukuze kuphuhliswe iziko ledatha, kuyimfuneko ukuqhubeka nokwandisa isikali kunye nokwandisa izixhobo. Oku akunakuncitshiswa, kodwa izinga lokusetyenziswa kwezixhobo kufuneka liphuculwe xa zisetyenziswa. Enye inxalenye enkulu yokusetyenziswa kwamandla kukutshatyalaliswa kobushushu. Ukusetyenziswa kwamandla kwiziko ledatha ye-air conditioning system akhawunti malunga nesinye kwisithathu sokusetyenziswa kwamandla kuzo zonke iziko ledatha. Ukuba sinokwenza iinzame ezingakumbi kule nto, isiphumo sokugcina amandla kwiziko ledatha siya kuba kwangoko. Ke, zeziphi iitekhnoloji zokulahla ubushushu kwiziko ledatha kwaye zeziphi izikhokelo zophuhliso lwexesha elizayo? Impendulo iya kufumaneka kweli nqaku.
Inkqubo yokwandisa ngokuthe ngqo yokupholisa umoya iba yinkqubo yokupholisa umoya. Kwinkqubo yokupholisa umoya, isiqingatha seesekethe zokujikeleza kwefriji zifumaneka kwi-air conditioner yegumbi lomatshini wedatha, kwaye ezinye zifumaneka kwi-condenser yokupholisa umoya yangaphandle. Ubushushu ngaphakathi kwigumbi lomatshini bucinezelwe kwindawo yangaphandle ngombhobho ojikelezayo wefriji. Umoya oshushu udlulisela ubushushu kwi-coil evaporator kwaye emva koko kwifriji. I-high-temperature kunye ne-high-pressure refrigerant ithunyelwa kwi-condenser yangaphandle nge-compressor kwaye isasaza ukushisa kwi-atmosphere yangaphandle. Amandla okusebenza kakuhle kwenkqubo yokupholisa umoya aphantsi ngokwentelekiso, kwaye ubushushu buchithwa ngokuthe ngqo ngumoya. Ngokombono wokupholisa, ukusetyenziswa kwamandla okuphambili kuvela kwi-compressor, i-fan yangaphakathi kunye ne-condenser yangaphandle epholileyo yomoya. Ngenxa yokwakheka okuphakathi kweeyunithi zangaphandle, xa zonke iiyunithi zangaphandle zivuliwe ehlotyeni, ukuqokelela ubushushu bendawo kuyabonakala, okuya kunciphisa ukusebenza kwefriji kunye nokuchaphazela umphumo wokusetyenziswa. Ngaphezu koko, ingxolo yeyunithi yangaphandle epholileyo emoyeni inempembelelo enkulu kwindawo engqongileyo, ekulula ukuba ibe nefuthe kubahlali abajikelezayo. Ukupholisa kwendalo akunakwamkelwa, kwaye ukonga amandla kuphantsi. Nangona ukusebenza kakuhle kokupholisa kwenkqubo yokupholisa umoya akukho phezulu kwaye ukusetyenziswa kwamandla kusephezulu, kuseyona ndlela isetyenziswa kakhulu yokupholisa kwiziko ledatha.
Inkqubo yokupholisa ulwelo
Inkqubo yokupholisa umoya ineziphene zayo ezingenakuthintelwa. Amanye amaziko edatha aqalise ukujikela ekupholiseni ulwelo, kwaye eyona ixhaphakileyo yinkqubo yokupholisa amanzi. Inkqubo yokupholisa amanzi isusa ubushushu ngepleyiti yokutshintshiselana ngobushushu, kwaye ifriji izinzile. Inqaba yokupholisa yangaphandle okanye isipholileyo esomileyo siyafuneka ukuze kufakwe indawo yecondenser yotshintshiselwano lobushushu. Ukupholisa kwamanzi kukhansela iyunithi yangaphandle epholileyo yomoya, isombulula ingxaki yengxolo kwaye inempembelelo encinci kwindalo. Inkqubo yokupholisa amanzi iyinkimbinkimbi, iyabiza kwaye inzima ukuyigcina, kodwa inokuhlangabezana neemfuno zokupholisa kunye nokonga amandla kumaziko amakhulu edatha. Ukongeza kokupholisa amanzi, kukho ukupholisa ioli. Xa kuthelekiswa nokupholisa amanzi, inkqubo yokupholisa i-oyile inokunciphisa ngakumbi ukusetyenziswa kwamandla. Ukuba inkqubo yokupholisa ioli yamkelwe, ingxaki yothuli ejongene nokupholisa umoya wendabuko ayisekho, kwaye ukusetyenziswa kwamandla kuphantsi kakhulu. Ngokungafaniyo namanzi, ioli yinto engekho-polar, engayi kuchaphazela i-electronic integrated circuit kwaye ayiyi kulimaza i-hardware yangaphakathi yomncedisi. Nangona kunjalo, inkqubo yokupholisa ulwelo isoloko iduma kunye nemvula kwiimarike, kwaye amaziko ambalwa edatha aya kwamkela le ndlela. Ngenxa yokuba inkqubo yokupholisa ulwelo, nokuba kuntywiliselwa okanye ezinye iindlela, ifuna ukuhluzwa kolwelo ukuthintela iingxaki ezinjengokuqokeleleka kongcoliseko, intlenga egqithisileyo kunye nokukhula kwebhayoloji. Kwiinkqubo ezisekelwe emanzini, ezifana nezo zixhobo zokupholisa ulwelo kunye nenqaba yokupholisa okanye imilinganiselo yokukhupha umoya, iingxaki zentlenga kufuneka ziphathwe ngokukhutshwa komphunga kumthamo onikeziweyo, kwaye kufuneka zihlulwe kwaye "zikhutshwe", nokuba unyango olunjalo. inokubangela iingxaki zokusingqongileyo.
Inkqubo yokupholisa i-Evaporative okanye i-adiabatic
Itekhnoloji yokupholisa umphunga yindlela yokupholisa umoya ngokusebenzisa ukuhla kweqondo lobushushu. Xa amanzi edibana nomoya oshushu oqukuqelayo, aqala ukuba ngumphunga aze abe yigesi. Ukutshatyalaliswa kobushushu obuphuma emphunga akufanelekanga kwiifriji ezinobungozi kwindalo, ixabiso lokufakela liphantsi, i-compressor yendabuko ayifuni, ukusetyenziswa kwamandla kuphantsi, kwaye kunenzuzo yokonga amandla, ukhuseleko lokusingqongileyo, uqoqosho kunye nokuphucula umgangatho womoya wangaphakathi. . Isipholisi esiphuphumayo yifeni enkulu etsala umoya oshushu kwipadi yamanzi amanzi. Xa amanzi akwipadi emanzi eba ngumphunga, umoya uyapholiswa uze utyhalelwe ngaphandle. Ubushushu bunokulawulwa ngokulungelelanisa ukuhamba komoya kwesipholileyo. Ukupholisa kwe-Adiabatic kuthetha ukuba kwinkqubo yokunyuka kwe-adiabatic yomoya, uxinzelelo lomoya luyancipha ngokunyuka kokuphakama, kwaye ibhloko yomoya isebenza ngaphandle ngenxa yokwandiswa komthamo, okubangelwa ukuhla kweqondo lokushisa lomoya. Ezi ndlela zokupholisa ziseyinoveli kwiziko ledatha.
Inkqubo yokupholisa evaliweyo
I-radiator cap yenkqubo yokupholisa evaliweyo ivaliwe kwaye itanki yokwandisa yongezwa. Ngexesha lokusebenza, umphunga wokupholisa ungena kwitanki yokwandisa kwaye ubuyele kwirediyetha emva kokupholisa, nto leyo enokuthintela ukulahleka okukhulu komphunga wesisipholisi kunye nokuphucula iqondo lobushushu lendawo yokubilisa. Inkqubo yokupholisa evaliweyo inokuqinisekisa ukuba i-injini ayifuni manzi okupholisa i-1 ~ 2 iminyaka. Ekusetyenzisweni, ukutywinwa kufuneka kuqinisekiswe ukuze kufumaneke umphumo. Isipholisi kwitanki yokwandisa asinakuzaliswa, sishiya indawo yokwandiswa. Emva kweminyaka emibini yokusetyenziswa, khupha kunye nokucoca, kwaye uqhubeke nokusebenzisa emva kokulungelelanisa ukubunjwa kunye nendawo yokukhenkcela. Kuthetha ukuba ukuhamba komoya okunganelanga kulula ukubangela ukushisa kwendawo. Ukupholisa okuvaliweyo kudla ngokudityaniswa nokupholisa amanzi okanye ukupholisa ulwelo. Inkqubo yokupholisa amanzi inokwenziwa ibe yinkqubo evaliweyo, enokuthi ikhuphe ubushushu ngokufanelekileyo kwaye iphucule ukusebenza kakuhle kwefriji.
Ukongeza kwiindlela zokuphelisa ubushushu ezichazwe ngasentla, kukho iindlela ezininzi ezimangalisayo zokulahla ubushushu, ezinye zazo sele zisetyenziswe ekusebenzeni. Ngokomzekelo, ukutshatyalaliswa kobushushu bendalo kwamkelwa ukwakha isikhungo sedatha kumazwe abandayo aseNordic okanye kwiindawo eziphantsi kolwandle, kwaye "ibanda kakhulu" isetyenziselwa ukupholisa izixhobo kwiziko ledatha. Njengeziko ledatha le-Facebook e-Iceland, iziko ledatha leMicrosoft kwindawo yolwandle. Ukongeza, ukupholisa amanzi akukwazi ukusebenzisa amanzi asemgangathweni. Amanzi olwandle, amanzi amdaka asekhaya kunye namanzi ashushu angasetyenziselwa ukufudumeza iziko ledatha. Umzekelo, i-Alibaba isebenzisa amanzi e-Qiandao Lake ukutshabalalisa ubushushu. UGoogle useke iziko ledatha esebenzisa amanzi olwandle ukuphelisa ubushushu eHamina, eFinland. I-EBay yakhe isikhungo sayo sedatha entlango. Ubushushu obuqhelekileyo bangaphandle beziko ledatha malunga ne-46 degrees Celsius.
Oku kungasentla kwazisa itekhnoloji eqhelekileyo yokutshatyalaliswa kobushushu kwiziko ledatha, ezinye zazo zisekwinkqubo yophuculo oluqhubekayo kwaye zisebuchwephesha baselabhoratri. Kwixesha elizayo lokupholisa amaziko edatha, ukongeza kumaziko ekhompyuter asebenza kakhulu kunye namanye amaziko edatha asekelwe kwi-Intanethi, uninzi lwamaziko edatha aya kufudukela kwiindawo ezinamaxabiso aphantsi kunye neendleko zamandla aphantsi. Ngokwamkela iteknoloji yokupholisa ekumgangatho ophezulu, iindleko zokusebenza kunye nokugcinwa kweendleko zamaziko edatha ziya kuncitshiswa ngakumbi kunye nokusebenza kakuhle kwamandla kuya kuphuculwa.